Igumbi lokulala eli-5 elinethiyetha, ichibi elikhulu, kunye nebhafu eshushu!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMark & Mandy
Intle ibhedi ezi-5 zokuhlambela ezi-4 ekhaya kwindawo edumileyo. Awukwazi ukubetha izixhobo! Yindawo yakho yabucala yokuchithela iiholide kunye ne-40 ft ichibi lokusutha (ichibi elitshiselwe umrhumo owongezelelweyo), ibhafu eshushu, ipatio ene-pergola kunye nesandi esijikelezileyo. Igumbi lethiyetha w 7 izitulo zokungqengqa kunye ne-TV eyi-70” kunye nesandi esijikelezileyo ngokunjalo. Inkosi kunye nelinye igumbi lokulala phantsi. 3 amagumbi okulala ngaphezulu phezulu. Eli khaya linekhitshi elikhulu kunye nesicwangciso somgangatho ovulekileyo kwaye siphakathi kufutshane neendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile! Yiza uhlale kwisiqwenga sethu separadesi!
Yiza uhlale kwiparadesi yakho yabucala esembindini kuyo yonke into kwaye kufutshane ne-ECU! Amagumbi okulala ama-5 amagumbi okuhlambela ama-4 anegumbi lethiyetha, ichibi kunye ne-tub eshushu konke kuwe! Onke amagumbi okulala anomabonakude wescreen esicaba axhonywe kunye nomabonakude’ kwigumbi elangeni nakwigumbi lokuhlala kunye nomabonakude omkhulu oyi-70” kwigumbi lethiyetha (inkosi ikwangama-70”!) Umhambi bhanyabhanya okanye abathandi bebhola YIPHUPHA!
I-HDTV ene-I-Disney+, I-Netflix
Ibekwe kwindawo ephakathi kuyo yonke into! Imizuzu eli-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePitt-Greenville (PGV)
ABALANDELI be-ECU: Imizuzu eli-10 ukusuka e-ECU kunye ne-Dowdy Ficklen Stadium! Isidanga seECU! I-PITT COMMUNITY kwiKholeji yokuthweswa izidanga, esembindini kuzo zonke izikolo eziphakamileyo zengingqi ngokunjalo!
UKUTHENGA: Imizuzu emi-5 ukusuka ezivenkileni (Okujoliswe kuko, igrosari, iWalmart, nayiphi na indawo yokutyela oyifunayo kunye nedashi yasecangweni, u-Uber uyatya, njl.njl efumaneka ngokulula) Edolophini naphezulu eGreenville kubomi basebusuku kunye neBar stool bar sports bar of the year “Sup dogs”
Ngaba kufuneka undwendwele!
IZIGANEKO: Iziko lendibano laseGreenville likumizuzu emi-3 ukuya kwemi-5 kuphela. Ukhuphiswano lweCheerleading, Ijimnastiki yeNgingqi idibana, imiboniso eyahlukeneyo kunye nemisitho ebanjelwe apha unyaka wonke.
IKONSATHI: yiza undwendwele iTheatre yeSizwe, udade kwiLincoln Theatre eRaleigh. Yiza ubone ibhendi yakho oyithandayo kunye ne-Uber ekhaya kwimizuzu eli-10, emva koko uphumle kwi-tub eshushu okanye ungene echibini!
INDAWO EYINGQONGILEYO: IGreenville ineedolophu ezininzi ezincinci ezineevenkile zakudala kunye neendawo zokutyela zasekhaya kunye nemivalo kunye neendawo zotywala ezikufutshane! Siyakuthanda ukuphonononga indawo yethu kwaye sityelele iidolophu ezincinci, sijikeleze kwaye sitye ukutya kwasekhaya! Ndiyavuya ukunika iingcebiso ezininzi! Adweliswe kwincwadi yethu yesikhokelo!
EBUHLENI: Imizuzu nje engama-30 ukusuka edolophini eLittle Washington. Hamba i-boardwalk, jonga iinqanawa zeseyile okanye izixhobo zomlilo phezu kwamanzi ngomhla weSine kaJulayi. Iodolo yokuthatha kunye nepikiniki, ndwendwela ilori yokutya yasekhaya okanye uhlale kwipatio kwenye yeendawo zokutyela ezingasemanzini.
PAKISHA I-COOLER!!! (Kukulungele egaraji 😉) Thatha iitawuli zaselwandle kwaye uye kwiibhanki zangaphandle! Iyure nje enesiqingatha kude ne-OBX eyaziwayo (ewe, uya kubona ezininzi zezo zincamathelisi!) Iilwandle zihle kwaye zixakekile ngezinto zokwenza! Ungaphoswa xa ukufutshane kakhulu!
Umbuki zindwendwe ngu- Mark & Mandy